FBC - Diinagdeen biyyattii akka cimuuf dameen dhuunfaa murteesadha -muummee ministiraa Dr. Abiy
FBC Kibxata Ebila 16 2010 E.C. - Tuesday, April 24 2018 G.C.
Raashiyaan misooma aadaa Ityoophiyaa kan deeggartuu fi damee kanaanis caarraa barnootaa bilisaan kan kennitu ta’uu ibsite
Yuunvarsiitin Harammaayaa Dooktar Jeeylaan Waliyyiif proofeesarummaa laate
Muummeen ministiraa Armeeniyaa taayitaa gadhiisan
Afriikaa Kibbaatti konkolaachiftoonni baasii miindaa dabalataa gaafachuun hiriira mormii ba’an
Preezdaant Dooktar Mulaatun daawwii hojiif Poolaand jiru
Diinagdeen biyyattii akka cimuuf dameen dhuunfaa murteesadha -muummee ministiraa Dr. Abiy
Finfinnee, Ebila 8,2010(FBC)- Diinagdeen biyyattii akka cimuuf dameen dhuunfaa murteesadha jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad.
Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad dameen daldalaa fi invastimantii akka jajjabaatuu fi diinagdeen biyyattii akka dadammaqu; hoteela Sharaatan Addiisitti abbootii qabeenyaa biyya keessaa waliin mari'ataniiru.
Preezdaantiin Mana Maree Daldalaa fi Dameewwanii Ityoophiyaa obbo Malaakuu Azzazaw gama isaanitiin rakkoon koontiroobaandii, dhiyeessii lafaa, bulchiinsa taaksii fi dorgomtummaa daldalaa furamuu akka qaban kaasaniiru.
Diinagdeen biyyattii akka cimuuf dhiyeessii fi fayyadamni sharafa alaa, dhiyeessiin maallaqaa, kenniinsi tajaajila dhaabbilee mootummaa, dorgommiin daldalaa sirriin, tasgabbiin biyyaa, wabiin invastimantii, dhaabbileen mootummaa dhuunfaatti dabarfamuu, mootummaan qonna meekaanaayzeeshiniif deeggarsa cimsuun murteessaa ta'uun hirmaattotaan ka'eera.
Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad waltajjicharratti akka jedhanitti, Ityoophiyaa daandii guddina diinagdee misoomawaa hordoftuuf kaappitaala liqaarratti rarra’uun bakka yaadameen ishee hin ga’u.
Kanaaf guddina yaadde galmaan ga’achuuf, damee dhuunfaa biyya keessaa jajjabeessun barbaachisaadha jedhan.
Diinagdeen biyyattii akka jajjabaatuf dameen dhuunfaa amma barbaadamu xiyyeeffannaan kallattii sirriin akka hojjetu muummee ministiraa Dooktar Abiy dhaamaniiru.
Rakkooleen gama mootummaa, dhiyeessiin maallaqaas fi sharafa alaa kan furamu ta'uu ibsaniiru.
Dooktar Abiy rakkoo diinagdee biyyattii hiikuuf abbootii qabeenyaa biyya keessatiif xiyyeeffannaan laatamee akka hojjetamu ibsuun, rakkooleen damicharratti danqaa ta'anii turan akka hiikamanis yaada laataniiru.
Waltajjicharratti muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad, ministirri Ministeera Daldalaa Ahimad Abbitoo, ministirri Ministeera Daldalaa Dooktar Baqqalaa Bullaadoon, abbootin qabeenyaa, ministiroonnii fi hoggansi naannoo argameera.
Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad Bitootessa 29,2010 naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti, Ebila 3,2010 ammoo jiraattota magaalaa Amboo fi naannooshee waliin mari’ataniiru.
Kamisa(Ebila 4,2010) paartilee morkattootaa biyya keessa jiran waliin Waajjira Muummee Ministiraatti kan mari’atan yammuu ta’u, Jimaata(Ebila 5,2010) ammoo naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti argamuun ummata mariisisaniiru.
Muummee ministiraa Dooktar Abiy kaleessa; Dilbata(Ebila 7,2010) magaalaa Finfinnee galma Barkumeetti dargaggoota biyyattii kuma 25 ol ta’an waliin mari’ataniiru.
Oduuwwan Biroo « Nagaa eegsisuurratti dhaabbatichi Ityoophiyaa waliin hojjechuu akka itti fufu ibse	Ityoophiyaa fi Maaltaan oomishoota qaraxaan ala galchuuf waliigalan »
Kantiibaan Magaalaa Niw-York duraanii waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paarisiif Doolaara miliyoona 4.5 arjoomuuf waadaa seenan
Oduuwwan Wiixata Galgalaa Ebila 15 2010.